किशोर नेपाल, जेष्ठ ३०, २०७५
यसपटक मेरो यात्राको सन्दर्भ जोडियो झम्सिखेल, ललितपुरको ‘मोक्ष’ सँग । कुमार नगरकोटीको नवीनतम कृति ‘ज्ञ’ लाई निर्वस्त्र उतारिँदै थियो मानिसहरूको निकै ठूलो भीडमा । जताततै मानिस नै मानिस । महिला र पुरुष बराबरीको संख्यामा । संख्यामा नभए पनि संविधान र कानुनका हिसाबले बराबर । पुरा पढ्नुहोस्
रामजी ज्ञवाली, जेष्ठ ३०, २०७५
कलाकारहरूले चलाउने फेसबुक तथा उनीहरूका पेजका पोस्ट त हामी सबैले देखिरहेकै हुन्छौं । हामीमध्ये कतिपयले ती पेज र पोस्ट लाइक गर्छौं, कमेन्ट गर्छौं । चित्त बुझे सेयर पनि गर्छौं, तर उनीहरूको फेसबुक इनबक्समा कस्ता खालका म्यासेज आउँछन् त ? त्यो भने रहस्यमै रहन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
बरिष्ठ कलाकार भिमबहादुर थापाको ९२ वर्षको उमेरमा बुधवार बिहान निधन भएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
एजेन्सी, जेष्ठ ३०, २०७५
बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री दीपिका पादुकोण तथा अभिनेता रणवीर सिंहको प्रेम–प्रसंगले बलिउड तरंगित भएको छ । यो जोडी आजभोलि सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत खुल्लमखुल्ला पुग्ने गरेको छ । पुरा पढ्नुहोस्
डा. सुमनराज ताम्राकार, जेष्ठ ३०, २०७५
पुरुष लिंगको सुपारी आकारको टुप्पो छालाले छोपिएको हुन्छ, जसलाई अग्रचर्म भनिन्छ । पुरुष लिंगमाथिको छाला तल माथि गर्न, लिंगको टुप्पालाई ओसिलो राख्न तथा यौनसम्पर्क सहज बनाउन अग्रचर्ममुनि स–साना आकारका असंख्य ग्रन्थि हुन्छन् । यही ग्रन्थिबाट उत्पादित रस सरसफाइको अभावमा बाक्लो भै सेतो देखिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
चार वर्षअघि ब्राजिलमा भएको विश्वकपको लोगो त्यति आकर्षक थिएन । यसै कारण लोगोका लागि यसपटक रूसले प्रशस्तै मेहनत गरेको छ । जति बेला विश्वकपको लोगो सार्वजनिक गरियो, सबैले माने, यो विशेष छ । यसका डिजाइन पोर्चुगलको लिस्बनस्थित संस्था ब्रान्डिया सेन्ट्रलले गरेको हो । पुरा पढ्नुहोस्
प्रत्येक विश्वकपअघि एउटा ठूलो समस्याका रूपमा देखापर्छ– नक्कली टिकट । यसपल्टको विश्वकप पनि त्यसको अपवाद रहेन । भनिन्छ, अहिले अनलाइनमै जति पनि नक्कली टिकट किन्न पाइन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
अभिनेत्री प्रियंका कार्की सोसल मिडिया क्रेजी छिन् । उनका फेसबुक तथा इन्स्टाग्राम प्रोफाइल नियाल्ने हो भने दिनहुँ अनेकौं तस्बिर अपलोड भएको पाइन्छ । सेलिब्रेटी भएपछि आफ्ना गतिविधि सोसल मिडियामा सार्वजनिक गर्नु सामान्य कुरा नै हो । पुरा पढ्नुहोस्